Dhisida Mustaqbal Waara - Xarunta EcoTechnology
Qoraalka maqaalkani waa dulmar guud oo ku saabsan dhismaheennii dhowaa ee dhacdada mustaqbalka ee waarta. Duubista dhacdada waxaa laga heli karaa qeybta hoose ee boggan.
Sida aan u doorano inaan naqshadeyno una dhisno dhismooyinka mustaqbalka waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa isticmaalka tamarta iyo samaqabka dadka degan. Mareykanka gudihiisa, dhismayaashu waxay ku xisaabtamaan qiyaastii 40% wadarta isticmaalka tamarta, 73% isticmaalka korontada, iyo 14% isticmaalkeena biyaha.Jaangooynta dhismayaasha waxtarka leh waxay naga caawin kartaa inaan hoos u dhigno isticmaalkeena tamarta iyo inaan sii dhigno raadkeena kaarboonka.
Mareykanku sidoo kale wuu qarash gareeyaa 90% waqtigooda gudaha (oo laga yaabo inay xitaa intaas ka badan yihiin tan iyo bilowgii cudurka faafa), iyo qaabeynta goobahan aan ku qaadano nolosheena inteeda badan waxay awood u leeyihiin inay saameyn ku yeeshaan caafimaadkeena iyo caafimaadkeena.
Habka ugu weyn ee loo hubiyo in dhismayaasha ay si hufan u socdaan, lahaadaan raad yar oo kaarboon ah, iyo kor u qaadista caafimaadka iyo samaqabka ayaa ah in la helo mashruucyo lagu caddeeyay barnaamijka shahaadada dhismaha oo ku dadaalaya in lagu gaaro himilooyinkan.
Shahaadooyinkaas waxaa ugu caansan hoggaanka Tamarta iyo Naqshadeynta Deegaanka, ama LEED. LEED waxay leedahay heerar shahaadooyin dhammaan noocyada mashaariicda laga soo bilaabo guryaha kelida ah, ilaa mashaariicda waaweyn sida iskuulada iyo dhismooyinka xafiisyada. Waxa kale oo jira barnaamijyo LEED oo loogu talagalay naqshadeynta gudaha, horumarinta xaafadaha, iyo waxyaabo kaloo badan.
Shahaadada LEED waxay tixgelin siineysaa arrimo badan oo ka imanaya helitaanka gaadiidka illaa tamarta iyo jawiga! Dhibcaha sawirka: Kent Hicks Construction Co.
Inta badan mashaariicdu waxay sare u qaadaan waxtarka iyo ladnaanta 6 qaybood oo waaweyn: goobta iyo gaadiidka, goobaha waara, tayada deegaanka gudaha, waxtarka biyaha, agabka iyo kheyraadka, iyo tamarta iyo jawiga.
Ku guuleysiga yoolalka ku jira lixdaan qaybood ee waaweyn, iyo sidoo kale yoolalka kale ee barnaamijka LEED sida hal-abuurnimada iyo mudnaanta gobolka ayaa ka dhigaysa dhismayaasha mid cagaaran oo sii waara.
Heer kale oo caan ah oo wax ku ool ah dhismaha ayaa ah Guri dadban. Guriga loo yaqaan 'Passive House' waa qaab dhismeed oo runtii tamarta ku habboon, raaxo leh, isla markaana isla markaa la awoodi karo.
Sida shahaadada LEED, waxaa jira halbeegyo cayiman oo ay tahay inuu buuxiyo oo uu oggolaado shahaado aqbaliye 'House Passive House' si dhismuhu ugu qalmo inuu noqdo Aqal Dadban.
Guriga la dhaafiyo waa heer dhisme caalami ah oo waxqabad sare leh oo runti diiradda saaraya waxtarka tamarta. Fiiri websaydhka ku lifaaqan booqashada gurigan quruxda badan ee sharafta leh ee Mount Holyoke Associate Professor of Physics, Alexi Arango! Dhibcaha sawirka: Alexi Arango
Waxaa jira laba hay'adood oo bixiya shahaadada Aqalka Hoose, Machadka Dadban (PHI) iyo kan Machadka Passive House ee Mareykanka (PHIUS). Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya labadooda ayaa ah in PHIUS ay yeelatay heer kululeynta iyo qaboojinta dalabyada iyadoo kuxiran jawigaaga, halka PHI ay qiyaaseyso cimilada woqooyiga Yurub.
Waxaa jira afar shuruudood oo shuruud guri aqbali ah, oo inta badan khuseeya waxtarka tamarta.
Caqabada Dhisida Nolosha
Ugu dambayn waa Caqabada Dhisida Nolosha (LBC) Dhismayaasha Nolosha waxay ku dadaalaan tamar saafi ah, waxay ka madhan yihiin kiimikooyin sun ah, waxayna hoos u dhigaan raadkooda tamarta marar badan oo ka hooseeya qaab dhismeedka guud ee ganacsiga.
RW Kern Center waa dhisme la aqoonsan yahay oo ku yaal dhismaha kuleejka Hampshire College. Mid ka mid ah oo keliya 23 Dhismayaasha Nolol ee si buuxda loo xaqiijiyay, Xarunta Kern waxay la kulantaa heerar sare oo xagga tamarta, biyaha, qalabka, meesha, quruxda, sinnaanta, caafimaadka, iyo farxadda. Dhibcaha sawirka: Xarunta Kern
Mashaariicda LBC waxay ku gaarayaan hadafkan iyagoo u hoggaansamaya 7 qaybood oo waxqabad ah, ama xayawaan. Tarankaani waa tamar, biyo, agab, goob, qurux, sinaan, iyo caafimaad & farxad. Taranka ayaa loo isticmaalaa in lagu matalo dhisme waxtar u leh sida ubaxa oo kale.
Wax badan ayaa laga dhahayaa sida heerarkani dhisme u yareeyaan saameynta deegaanka ee dhismayaasha laakiin waxaan diirada saareynaa labo aag — tamarta tamarta iyo kaarboonka la isku daray.
Waxaan isbarbar dhigi karnaa waxtarka tamarta ee barnaamijyadan shahaado bixinta adoo fiirinaya Qiimaynta HERS ee mashaariic dhameystiran. Qiimeynta HERS ee guriga waa halbeegga waxtarka tamartiisa; dhibcaha hoose ayaa ka sii fiican. Fiiri ah Websaydhka HERS Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka qiimeynta.
Kaliya macno ahaan, celceliska guriga cusub ee Massachusetts wuxuu leeyahay qiimeyn HERS ah qiyaastii 70.
Qiimaynta HERS ee dhismayaasha la aqoonsan yahay ee LEED aad ayey u kala duwan yihiin laakiin caadi ahaan waxay ku dhacaan inta u dhexeysa 0-70, dhismayaasha loo yaqaan 'Passive House' waxay caadi ahaan ku dhacaan inta u dhexeysa 0-40 (taasoo ka dhigeysa inta u dhexeysa 30-70% ka waxtar badan celceliska guriga cusub ee Massachusetts).
Farqigaani udhaxeeya qiimeynta HERS wuxuu muujinayaa faraqa ugu weyn ee udhaxeeya LEED iyo Guriga dadban. Guriga aan caadiga ahayn wuxuu si aad ah diirada u saaraa waxtarka tamarta, halka dhismuhu uu noqon karo mid celcelis ahaan wax ku ool ah laakiin wali wuxuu helayaa LEED shahaado haddii uu run ahaantii ku kaco qaybaha kale ee barnaamijka.
Kaarboon ku duugan
Qayb kale oo weyn oo wax ku biiriya raadadka kaarboonka dhismaha waa kaarboonka ku jira maadooyinkiisa. Qiiqa badan ayaa lagu sii daayaa macdanta, ka baaraandegidda, rarka, iyo ugu dambeynta qashinka ee qalabka dhismaha. Raad-dhismeedka raadka deegaanka ayaa si weyn loo yareyn karaa iyadoo la adeegsanayo qalabka dhismaha leh kaarboon yar oo ay ku jirto.
Habka ugu wanaagsan ee lagu yareyn karo kaarboonka jirka ku jira ayaa ah in dib loo isticmaalo qalabka dhismaha. Markaad dumineyso ama aad dib u cusbooneysiineyso guri, waa suurtogal in la sameeyo inta la badbaadinayo qalabka iyo qalabka guriga ku jira habka loo yaqaan dib u dhiska. CET waxay ka shaqeysaa dukaan ku yaal Springfield, MA oo loogu yeero Gorgortanka EcoBuilding halkaas oo aad ugu deeqi karto oo aad ku iibsan karto qalab tayo sare leh oo dib loo soo celiyey iyo qalabka dhismaha qayb yar oo ka mid ah qiimahoodii asalka ahaa.
Haddii qalabka dib loo soo celiyo ayan ahayn ikhtiyaar, waxaa jira talaabooyin dhisayaasha iyo naqshadeeyayaashu ay u qaadan karaan inay u isticmaalaan qalabka leh kaarboon yar oo xaddidan.
Sida ugu wanaagsan ee tan lagu sameyn karo waa in la isku dayo oo la xaddido isticmaalka birta iyo shubka. Qalabkani wuxuu xisaabiyaa qiyaastii 8% kasta wadarta guud ee qiiqa hawada lagu sii daayo.
Dhismayaasha iyo naqshadayaashu waxay isticmaali karaan shubka kaarboon ka hooseeya, ama waxay xadidi karaan isticmaalka shamiitada ee dhismaha, laakiin mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu dhimi karo raadadka kaarboonka dhismaha ayaa ah in lagu dhiso alwaax.
Qoryaha iskutallaabta ku dahaaran (CLT) waxaa sameeya qaybo yar oo alwaax ah oo isku dhegan oo isku wada riixaya qaab iskutallaab ah. CLT iyo noocyo kale oo alwaax cufan ah ayaa sameeya adkeyn, olol u adkaysi leh, iyo qalab dhisme u roon deegaanka. Dhibcaha sawirrada: APA - Ururka alwaaxda injineernimada
Alwaax waara oo la beeray wuxuu leeyahay a raad aad u hooseeya oo kaarboon ah ka badan shubka iyo birta. Waxay leedahay saameyn xitaa ka sii wanaagsan marka aad tixgeliso qadarka CO2 ee alwaaxku nuugayo oo keydinaya marka ay koraan.
Waxaa jira tiro badan oo ah alaabada alwaaxda fasalka dhismaha oo la yiraahdo alwaax tiro ka dhigaya dhismayaasha dhaadheer alwaax aamin ah oo wax ku ool ah.
Dhisida cagaarka sidoo kale waxay u fiicnaan kartaa jeebkaaga. Dhismayaasha cagaaran waxay keeneysaa keyd muhiim ah tamarta, qashinka, biyaha, iyo kharashyada dayactirka. LEED dhismayaasha la xaqiijiyay celcelis ahaan badbaadin 25-30% tamartafurayaa faylka PDF marka la barbardhigo dhismayaasha soo jireenka ah, iyo Guryaha Dadban waxay soo saari karaan kharashyo yar oo xagga nolosha ah tan iyo markii ay yaree kharashka kuleylka 75-90%.
Dhismayaasha waara waxay sidoo kale abuuri karaan koror ku yimaada qiimaha hantida dhismayaasha dhaqanka. Milkiilayaasha guryaha cagaaran way arki karaan a 10% ama ka badan kororfurayaa faylka PDF qiimaha hantida gurigooda, iyo sidoo kale dhisidda qiyamka 7.5% ka sareeya ka badan guryaha isbarbar dhiga.
Caafimaadka iyo Fayoobaanta
In a waxbarasho oo laga sameeyay meherad ka guurtay dhisme dhaqameed loona wareejinayo dhisme LEED la aqoonsan yahay, cilmi baarayaashu waxay baareen shaqaalaha ka hor iyo ka dib dhaqaajinta waxayna ogaadeen in shaqaaluhu maqnaansho yar yahiin xiiqda iyo xasaasiyadda neef mareenka awgeed, waxay ahaayeen kuwo aan walwal qabin, waxsoosaarna ku leh dhismaha shahaadada LEED.
Horumarintani waxay badanaa u sabab ahayd hawo hagaajinta, iftiinka dabiiciga ah, iyo walxaha naqshadeynta biophilic ee barnaamijka LEED u baahan yahay.
Waxbadan ka baro barnaamijyada 'LEED' iyo barnaamijyada 'Passive House' ee CET, iyo sidoo kale mashaariicda kale ee Dhismaha Waxqabadka Sare halkan.
Baadhid Gorgortanka EcoBuilding qalabka dhismaha dib loo soo celiyey!